Sida aad la socotaan Computer-ku wuxuu ka kooban yahay Hardware iyo Software isku xidhan, wada hadla ama wada shaqeeya oo qayb walba shaqo gaar ah u xilsaran tahay, si ay u dhamaystiraan shaqada gaarka ah ee loo diray wakhti kasta oo go'an, waxaa la mid ah Technoolajiyada loo yaqaano Artificial intelligence (AI), dadka qaarna ay u yaqaanaan Computational Intelegence ama Virtual intelligence oo ah Software ama algorithm suuragalinaya in mashiinadu ay go'aan gaadhi karaan.
Tusaale ahaan, marka wax lagu waydiiyo, waxaad dhagaysataa wixii lagu waydiiyay ka dib maskaxdaada iyo aqoonta aad u leedahay waxaa lagu waydiiyay ayaad jawaab ku bixisaa, Artificial intelligence (AI) waa sidaa oo kale mashiinka waxaa lagu tobobaraa su'aalaha kaga iman kara shaqada uu qabanayo iyo jawaabahooda, wixii ku adkaada dib ayaa loogu tobobaraa ilaa uu tobobarkiisa dhamaysto. Waxaa maadadan bilaabay oo lagu tilmaamaa iuu aabe u yahay McCarty sanadkii 1956 oo sameeyay Software la dhaho List processing (LISP), waxay AI soo kordhisay in shaqo ay dad badan qaban lahaayeen ama aan suuragal u ahaan lahayn inuu baniiaaadam qabto uu hal mashiin ah qabto, oo aan dad loo baahanin ama loo qabto si fudud oo ka dag-dag badan marka aan technoolajiyadan la isticmaalaynin, waa wadashaqayn dhex mari karta labo mashiin ama dad iyo mashiin.
Waxyaabaha Technoolajiyadn loo isticmaalo sanadahan danbe waxaa ka mid Data analysis, Data visualisation, key performance indicators(KPI) iyo Strategic planing. Hadii la sii jajajabiyo awoodaha Technoolajiyada Artificial intelligence waxaa ka mid ah Automatic Speech recognition, face recognition, Translations iyo kuwo la mid ah.